Etu esi tinye nzaghachi akpaka na gam akporo Auto | Gam akporosis
Etu esi tinye azịza akpaka na gam akporo Auto
Ọtụtụ mmadụ na-eji ngwa gam akporo Auto iji ngwa dị ka isi dị ka Google Maps, Waze ma ọ bụ ọbụna kpọọ egwu na-enweghị wepụ anya gị n'okporo ụzọ. Iji ngwa a, ị nwere ike ijikwa ihe niile metụtara na ngwa ndị kachasị ewu ewu, gụnyere ndị ahịa izi ozi.
Enwere ọtụtụ nhọrọ dị n'ime nke ngwa ọrụ a maara nke ọma karịa ihe karịrị nde nbudata 1.000 kemgbe etinye ya na Storelọ Ahịa Play. Ọzọkwa ọ bụrụ na anyị chọrọ ilekwasị anya n’ịkwọ ụgbọala, ihe kachasị mma bụ tinye akpaka na-aza na gam akporo Auto, karịsịa maka ngwa dịka WhatsApp ma ọ bụ Telegram.
Na ụdị gam akporo Auto Auto na nso nso a, onye ọrụ ga-enwe ike hazi nzaghachi akpaka, Ya mere, ọ bụ adaba ka nwere emelitere version. Iji mee nke a, lelee otu ihe ahụ site na Storelọ Ahịa Play, chọọ ngwa ahụ wee lelee na ọ nweghị onye ikpeazụ na-eche ka ebudata ya.
Enwere ike ịkọwa nzaghachi akpaaka site na usoro n'onwe ya ya na ozi “Ana m anya ụgbọ ala, aga m aza gị ma emechaa”, a ga-eziga ya na kọntaktị ụfọdụ na akwụkwọ ndekọ ekwentị anyị. Ngwa ndabara na-etinye ozi a, mana anyị nwere ike ịgbanwe ya na nke ọzọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ozi nkeonwe mgbe ana-akpọ oku ma ọ bụ na-anata ozi.
Ọ dị mma iji rụọ ọrụ ya mgbe ọ bụla ị na-anya ụgbọala na ụzọ iji zere iwepụ anya gị n'okporo ụzọ dịka ọ na-eme na ngwa ndị ọzọ. Gam akporo Auto na ndabara gbanyụọ nhọrọ na onye ahu nwere ohere nke ime ihe ma obu deactivating ya mgbe obula ha choro.
Iji rụọ ọrụ akpaka Ibọrọ na gam akporo Auto ị ga-eme ihe ndị a:
Mepee gam akporo Auto app na ekwentị mkpanaaka gị
Nweta Ntọala nhọrọ na chọta "Ozi"
Ugbu a tinye nhọrọ "Akpaaka akpaaka", ebe a ị nwere ike ịhazigharị ndị akọwapụtara ma ọ bụ dozie ụdị akwụkwọ ntuziaka, ị nwere ike ide ozi ga-erute onye nke ọzọ, site na iji obere ederede ma ọ bụ ihe dị ogologo karịa ka ọ dị
Ọ kasị mma ịkọwa ozi azịza ya na ederede dị iche, na-agbakwunye mmetụ nke aka gị ka ọ ghara iyi ka oyi dị ka "Ana m akwọ ụgbọala, aga m akpọ gị mgbe e mesịrị." Ga-enwe ike ịgbanwe ozi mgbe ọ bụla ịchọrọ, ị nwere ike ịchekwa ndị gara aga ma ọ bụrụ na ịchọghị ida ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi tinye azịza akpaka na gam akporo Auto
Esi agba egbugbere ọnụ ma ọ bụ chọọ ihu gị mma na Mbugharị: nnukwu ihe ọhụụ nke ngwa oku vidiyo
HTC Wildfire E Lite bụ obere njedebe na gam akporo 10 Go Edition